Equipe de France - ewa.mg
Tadiavin’ny Maroc, Mattéo Guendouzi (Arsenal) dia nanamarina ny faniriny hilalao ho an’ny Bleus
Raha niseho voalohany tamin’ny Équipe de France Espoirs, volana vitsivitsy amin’ny Euro U21 any Italie, Mattéo Guendouzi dia niseho tsara tamin’ny lalao nataony. Mitovy ny zavatra nasehony tany Arsenal, ilay milier-n‘ny Lorient taloha dia tena nivoatra tokoa ka maro ireo miandrandra azy amin’ny fiarovana ny lokon’ny firenena. "Nofinony izany hilalao amin’ny équipe de France A" Marina tokoa, noho ny fisian’ny Coupe d'Afrique des Nations 2019, i Hervé Renard dia nanatona azy mba hanontany sy hiezaka ny handresy lahatra azy, satria ilay mpilalao izay nandalo tamin’ny toerana fampiofanan’ny Paris Saint-Germain dia avy any Maroc, i Guendouzi dia afaka ny hiara hilalao amin’i Hakim Zyiech, Younes Belhanda sy ny namany ao amin’ny Lion de l’Atlas. Na izany na tsy izany ilay Gunners dia naniry ny hanazava ny toe-draharaha tamin’ny alatsinainy hariva teo amin’ny micro-n’ny Canal+, tao aorian’ny lalao ampirahalahiana natao tamin’i Espagne U21. "hatramin’ny fahazazako, dia nilalao tamin’ireo équipes de France rehetra aho. Nofinofy izany hilalao ho an’ny équipe de France A izany. Ary manantena aho fa ho vitako izany." Mazava ny hafatra ary mety ho tonga hatrany amin’ny sofin’i Didier Deschamps.